VLC DVD: Sida loo Guba VLC Faylal ay si DVD (Windows 8 Mid)
VLC Player waa ciyaaryahan caalami ah warbaahinta in u ciyaaro qaab video ku dhawaad ​​kasta iyo xitaa DVD. Waxa kale oo ay sii qulquli karaan video sida TV si toos ah u muujinaysaa ka server geeyo ah. Laakiin waxaa laga yaabaa in aadan ogayn in sidoo kale awood u Deji iyo kelmadaha video files iyo sidoo kale maktabadaha VLC in DVDs, si aad u isticmaali kartaa in video ciyaaryahan aad. Hadda waxaan halkan u taaganahay in ay kaa caawiso gubi DVDs by VLC Player la talaabada hab tallaabo. Si kastaba ha ahaatee, waa yara habka wax yar adag oo dhib badan. Sidaas oo kale waxaan ku talinaynaa qalab kale DVD gubashadii si sahlan loo isticmaalo si hawshan ay u dhammeeyaan la mid ah. Haddaba ee aan ku bilaabo:
Qeybta 1: Gubashada VLC Faylal ay si DVD la VLC
Qeybta 2: hab sahlan in Guba VLC Faylal ay si DVD
Tallaabo 1: Ku dar file in VLC
Fur VLC. Markaas riix "Media", dooro "Stream".
Tag tab File iyo guji "Add". Browse iyadaa filimka. Dooro filimka la horyaalka xaq in aad rabto in aad ku gubi.
Talaabada 2: Calan goobaha ay ka hor habka gubanaya
Waxaad tijaabin kartaa filimka doorataa "Play" ka menu hoos-hoos. Haddii wax walba waa OK ka dibna dooro "Stream" ka hoos-hoos ee soo socda in ay "Play". Waxa kale oo aad ku dari kartaa subtitles si uu shineemada. Cinwaan Tani waxay ku qeexan doonaa filimka.
Hubi in halka uu filimka kulan oo aan hore u soo galaan. Markaas riix "Next".
Uncheck Display ee degaanka sanduuqa si loo dedejiyo geedi socodka ku gubanayso. Dooro "File" ka menu hoos-hoos iyo guji "Add".
Riix Browse in ay doortaan folder Ahaado. Dooro DVD drive aad u gubi movie ee DVD ah. Magac Nooca filimka aad rabto inaad ka badbaadin sida.
Fiiri sanduuqka soo socda si Transcoding firfircoon. Dooranaysaa profile qaab filimka. Waxaa lagu talinayaa H.264 + MP3 (MP4) - Video. Waxaad astaysto fursadaha sare adigoo gujinaya menu qalabka. Riix in la sii wado in tallaabada xigta ee soo socota.
Tallaabo 3: Ka bilow habka gubashadii
Dooro "Dhammaan Hoose durdurro". Markaas eeg "il ahbaa xarig saarka" sanduuq wada hadal, haddii ay wax walba waa OK. Markaasuu ku dhacay "Stream".
Ka dhig samir. Markii ugu gubanaya waxay ku xiran tahay tirada filimka iyo xawaaraha qoraal ah DVD drive aad.
Inkastoo VLC aad u saamaxaaya in ay gubi files si DVD, waxaad ka heli kartaa waxa ay ku adag tahay oo dhib badan. Sidaas halkan anther adag software DVD gubi - Wondershare Video Converter Ultimate lagu talinayaa. Waxay kaa caawinaysaa in aad si fudud ku gubi aad files VLC in DVD leh DVD menu cajiib ah. Hadda, waxaan ku tusi doonaa sida ay gubaan files VLC in DVD talaabo talaabo ah.
Talaabada 1: shuban VLC videos in Converter DVD ah
Ka dib markii DVD Creator u sameysan yahay ayaa ku your computer, waxaa la furo iyo in uu furmo suuqa hoose, guji "Add Files" button ku darto soo bixi files VLC kombiyuutarka, ama jiita iyo hoos u videos inay dar videos VLC galay Window aasaasiga ah. Dhinaca bidix, waxaad sameyn kartaa ratio tayada iyo dhinaca of videos ah.
Talooyin: Double guji kasta oo video laga keeno si ay u eegis xagga daaqaddii midig.
Talaabada 2: Edit videos oo qarka u saaran video kala guurka
Haddii aad files VLC ciyaari kaamil ah, waxaad ka boodi kartaa tallaabadan. Laakiin haddii ay jiraan ayna duleella in aad video, isticmaalaan qalab ku anfacaya in ay iyaga wax ka bedel. Dhammaan qalabka tafatirka ee aasaasiga ah ayaa ku jira. Riix ah "Edit" icon soo socda horyaalka video ah si aad u bilowdo. Waxaad noola, isku shaandheyn, jar aad video iyo dar subtitles in VLC videos.
Talaabada 3: Dooro DVD menu ah oo loogu badalo VLC in DVD
Dooro DVD menu ama u astaysto sida aad rabto. Ka dib markii dhammaan goobaha lagu sameeyey, guji "Guba" si loogu badalo files VLC in DVD la qurux DVD menu. Iyada oo ay taasi VLC fududahay in DVD gubi, aad ku raaxaysan karaan VLC videos on ciyaaryahan kasta DVD saaxiibadaa.
> Resource > VLC > VLC DVD: Sida loo Guba VLC Faylal ay si DVD (Windows 10 ka mid ah)